Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Doorashooyinka oo ka soo horjeestay xil ka qaadistii lagu sameeyay | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Doorashooyinka oo ka soo horjeestay xil ka qaadistii lagu...
Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Doorashooyinka oo ka soo horjeestay xil ka qaadistii lagu sameeyay
Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga Madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka ee xilka ka qaadista lagu sameeyay Sayid cali ayaa ka horyimid arrinkaasi.
Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in 10-ka bishaan ay soo gaartay warqad ka soo baxday xubno ka tirsan Guddiga Madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka oo ku aadan inay xilka iyo xubinnimadii Guddiga uu ka haayay laga xayuubiyay,iyadoona qoraalkaasi uu ku saxiixnaa Guddoomiyaga Guddiga Doorashiinka Xaliimo yarey.
Waxa uu eedeeymo kala duwan uu u jeediyay Guddiga Doorashooyinka qaranka oo ay Guddoomiye u tahay Xaliimo Ismaaciil Yarey.
Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga Madaxabanaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa horjeestay xilka qaadistaasI lagu sameeyay,waxa uuna sheegay in si cadaalad ah aan loo marin,isla markaana uu hortegi doono Golaha Shacabka si halkaasi uu uga jeediyo eedeeymo la xiriira Guddiga Doorashooyinka.
Qoraal ay soo saareen Guddiga Madaxabannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa waxaa xilka looga qaaday Guddoomiye ku xigeenkii Guddiga, isla mar ahaanta ka saaray xubinnimada,iyagoona lagu eedeeyay in uu u ku xadgudbay sharciga guddiga.